3D Yakavanzwa Series
Ovit Kitchen & Bath Company iri muna Zhishan muguta Heshan guta, inoganhurana mujinga pombi dzemvura uye utsanana vazviziva China. Ovit ari nyanzvi kambani kusanganisa R & D, mukugadzira uye okutengesa.
Ovit rakaumbwa muna 2011. Kubvira pakagadzwa, nhaka utsanzi mweya, Ovit inonyanya wokutsvakurudza uye kuvandudzwa Stainless simbi akagadzira singi zvigadzirwa. Kuita pfungwa yekuvaka zvakasvibirira upenyu hwakanaka kicheni, Ovit yakatanga musi itsva dzinotevedzana zvibereko S / S kicheni makabhati uye yokugezera cabinet muna 2016.
Nepo pamusoro kutanga zvinhu zvitsva uye uvake yokutengesa mugadziriro, Ovit nguva dzose kunobatsira womukati utariri hwakakwana kugadzirwa Kwevadzidzi uye unhu kutarisirwa gadziriro, iyo inotungamira kuna yakatsiga uye yakavimbika unhu uye vaitungamirira zvinzvimbo indasitiri.
In ramangwana, Ovit acharamba kuumba mberi uye kuvandudza chinoumba competencies, nekutora Heath, fashoni, yepamusoro sezvo mureza, dira pakugadzira vasununguka, utano, yakakunakira zvigadzirwa mu high quality.